အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု ၃ ရပ် - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု ၃ ရပ်
Posted by zar ni (My Way!) on July 23, 2012 at 13:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
antimoon website က Tomasz P. Szynalski ရေးတဲ့ Three biggest challenges facing an English learner ကိုဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အမြင်မှတ်ချက်တစ်ချို့ကို စာလုံးစောင်းနဲ့ကွင်းခတ်ပြီးထည့်ပေးထားပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသူအားလုံးကတော့အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်ချင်ကြပါသည်။ သူတို့ဟာအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့သွက်သွက်လက်လက် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တက်ကြွနေတတ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း သူတို့ဟာအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှုဖြစ်စဉ်ကိုယ်၌ကိုကျတော့ စိတ်ဝင်တစားမရှိတတ်ကြပါဘူး။ စာသင်သားအများစုအတွက် အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာချင်း ဆိုတာဟာ မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရမယ့် တာဝန်ကြီးတစ်ရပ်လိုဖြစ်နေပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှုမှာ ပျော်စရာမတွေ့ တတ်ကြပါဘူး။
အတိုချုံ့ပြောရရင်တော့ လေ့လာသူအများစုဟာ အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်ချင်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာမလေ့လာချင်ကြပါဘူး။ ဒါဟာ စာသင်သားတွေရဲ့ နံပါတ်တစ် အကြီးမားဆုံးပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာမသင်ချင်တဲ့လူအတွက် စာတတ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ကမချစ်ရင် အင်္ဂလိပ်စာကလည်း သင့်ကိုပြန်ချစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။
တဲ့အလုပ်ဟာအခက်ခဲဆုံးပါပဲ။ဘယ်လောက်ပဲသူတို့ကို အင်္ဂလိပ်စာတတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှင်းပြရှင်းပြ သူတို့ဟာ ဆရာတစ်ယောက်သင်တဲ့အတန်းထဲလာထိုင်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာပြောတတ်ရေးတတ်မယ် ထင်နေကြတုန်းပါပဲ။တစ်ချို့ကျောင်းသားတွေကတော့ မိဘကတက်ခိုင်းလို့၊ ကိုယ့်ရည်းစား၊ သူငယ်ချင်းရှိတဲ့အတန်းမို့လို့ အပျော်လာတက်ကြသူတွေလည်းရှိပါရဲ့။ သူတို့ကတော့ နဂိုတည်းက စာတတ်ချင်စိတ်မရှိတာမို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မြင်ဆရာကြားဆရာ
ကိုကျော်သူရိန်ပြောသလို I don't care for losers. လို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း learning must be fun ဆိုလို့ ရယ်ရဖို့လောက်ပဲအားထုတ်နေရင်လည်းအဓိကလမ်းကြောင်းက လွဲသွားနိုင်ပါတယ်။)
အောင်မြင်တဲ့စာသင်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စာသင်တာကိုနှစ်သက်နိုင်ရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပျော်စရာနဲ့သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မယ့် အချိန်တစ်ခုတော့ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အဘိဓါန်၊ သဒ္ဒါစည်းကမ်းလမ်းညွှန်စာအုပ်များ နဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာများကိုလေ့လာပြီး အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတစ်ခုလောက်မှန်မှန်ကန်ကန်ချရေးကြည့်ခြင်း
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာမှုလုပ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘ၀ပုံစံကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တစ်ယောက်ယောက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တစ်နေ့ နာရီဝက်ဖတ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ၄င်းဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘ၀မှာဒီလိုမျိုး အသေးအဖွဲကိစ္စ၊ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းတည်မြဲနေမယ့်အပြောင်းအလဲ လေးတစ်ခုလုပ်ရတာ အင်မတန်ခက်ခက်ခဲလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာရတာ ပျော်စရာမကောင်းဘူးလို့အမြင်ရှိထားရင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်စာသင်သားတို့မမေ့သင့်တာက နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ်လောက်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာဟာ တစ်လမှာတစ်ခါလောက် တစ်နေကုန်လေ့လာတာထက် ပိုရလာဒ်ကောင်းတွေဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
၃။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ပိုပြီးပြောင်းလဲမှုထပ်လုပ်ခြင်း
ပထမဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲရတာအခက်ဆုံးဆိုရင် နောက်ကလိုက်လာရတဲ့အပြောင်းအလဲတွေဟာလည်းခက်တာပါပဲ။ စာသင်သားအများစုဟာ ပထမအဆင့်ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးရင်အဲဒီနေရာမှာတင်ရပ်နေတတ်ကြတယ်။ ဆိုပါစို့။နေ့တိုင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်တယ်ဆိုရင် စာဖတ်ရုံအဆင့်ပဲရပ်နေကြတယ်။ တခြား အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်မယ့် အလုပ်တွေတွေအများကြီးကိုဆက်မလုပ်ကြတော့ဘူး။ စာသင်သားကောင်းတစ်ယောက်မှာ လုပ်ရမယ့် activities တွေစုစည်းထားသင့်တယ်။ (စာဖတ်ခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ခြင်း၊ အသံထွက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ နားထောင်ခြင်း စတာတွေ) ကနေ မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရွေးချယ်ရပါမယ်။ လေ့လာမှုပုံစံတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (၁) သင်ခဏလေးနဲ့ပျင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (၂) လေ့လာရတဲ့ဘာသာစကားစွမ်းရည်နယ်ပယ်ဟာအင်မတန်ကျဉ်းမြောင်းလွန်းပါတယ်။ ဥပမာ စာဖတ်မယ်ဆိုရင် သဒ္ဒါ၊ ဝေါဟာရ၊ နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့အရေးအသားမှာ တိုးတက်လာပေမယ့်အသံထွက်မှာတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
(ဖိုရမ်တွေမှာခဏခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ “အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ အကြံဥာဏ်ပေးကြပါ” ဆိုတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေမြင်ရရင်တော်တော်လေးစိတ်မသက်မသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာလို အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ နည်းလမ်းတွေရေးပေးနေတဲ့သူတွေ ရေးထားတာတွေအများကြီးရှိပါလျက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ရှာဖတ်ဖို့လုံ့လလေးတောင်မထုတ်နိုင်တဲ့သူဟာ အင်္ဂလိပ်စာ (ဘာသာစကားတစ်ခု၊ အတတ်ပညာတစ်ခု)ကိုတတ်လာဖို့ဘယ်လို့မှ လမ်းစမမြင်မိပါဘူး။ တကယ်တတ်ချင်တဲ့သူဟာ အဲဒီလိုမေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အဆင့်ကလေးနဲ့ တင် ဗဟုသုတ ရှာဖွေစုစောင်းရင်းနဲ့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးတက်လာရမှာပါ။ တစ်ကယ်တမ်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဘ၀မှာ ကိုယ်လိုချင်တာကိုရဖို့ လုံလ၀ိရိယက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်နယ်ပယ်ဘယ်လောကမှာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့(Self-control)သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲလှတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူက နည်းနည်းအောင်မြင်ပြီး များများထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူက များများအောင်မြင်ကြတာပေါ့။ သင် winner လုပ်ချင်သလား loser လုပ်ချင်သလား။ သင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမှာမလွဲပါဘူး။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့သီချင်းစာသားလေးလို “+ + +ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတော့ရှိရမယ်။ မယုတ်မလွန်တဲ့ကျိုးစားမှုတော့ရှိရမယ်။ နတ်စီတဲ့အိပ်မက်လှလှများ လွယ်လွယ်နဲ့မရ . . + + +” ဆိုသလိုပေါ့။)
antimoon website က Tomasz P. Szynalski ရေးတဲ့ Three biggest challenges facing an English learner ကိုဘာသာပွနျပေးထားပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့အမွငျမှတျခကျြတဈခြို့ကို စာလုံးစောငျးနဲ့ကှငျးခတျပွီးထညျ့ပေးထားပါတယျ။
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားလလေ့ာသူအားလုံးကတော့အင်ျဂလိပျစကားကောငျးကောငျးပွောတတျခငျြကွပါသညျ။ သူတို့ဟာအင်ျဂလိပျစကားနဲ့သှကျသှကျလကျလကျ ဆကျသှယျပွောဆိုနိုငျမယျဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့တကျကွှနတေတျပါတယျ။ သို့သျောလညျး သူတို့ဟာအင်ျဂလိပျစာလလေ့ာမှုဖွဈစဉျကိုယျ၌ကိုကတြော့ စိတျဝငျတစားမရှိတတျကွပါဘူး။ စာသငျသားအမြားစုအတှကျ အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာခငျြး ဆိုတာဟာ မလုပျမဖွဈလုပျရမယျ့ တာဝနျကွီးတဈရပျလိုဖွဈနပေါတယျ။အင်ျဂလိပျစာလလေ့ာမှုမှာ ပြျောစရာမတှေ့ တတျကွပါဘူး။
အတိုခြုံ့ပွောရရငျတော့ လလေ့ာသူအမြားစုဟာ အင်ျဂလိပျလိုပွောတတျခငျြပမေယျ့ အင်ျဂလိပျစာမလလေ့ာခငျြကွပါဘူး။ ဒါဟာ စာသငျသားတှရေဲ့ နံပါတျတဈ အကွီးမားဆုံးပွဿနာတဈခုပါပဲ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ စာမသငျခငျြတဲ့လူအတှကျ စာတတျဖို့မလှယျပါဘူး။ အင်ျဂလိပျစာကိုသငျကမခဈြရငျ အင်ျဂလိပျစာကလညျး သငျ့ကိုပွနျခဈြမှာမဟုတျဘူးလေ။
တဲ့အလုပျဟာအခကျခဲဆုံးပါပဲ။ဘယျလောကျပဲသူတို့ကို အင်ျဂလိပျစာတတျခွငျးရဲ့အကြိုးကြေးဇူးတှရှေငျးပွရှငျးပွ သူတို့ဟာ ဆရာတဈယောကျသငျတဲ့အတနျးထဲလာထိုငျတာနဲ့ အင်ျဂလိပျစာပွောတတျရေးတတျမယျ ထငျနကွေတုနျးပါပဲ။တဈခြို့ကြောငျးသားတှကေတော့ မိဘကတကျခိုငျးလို့၊ ကိုယျ့ရညျးစား၊ သူငယျခငျြးရှိတဲ့အတနျးမို့လို့ အပြျောလာတကျကွသူတှလေညျးရှိပါရဲ့။ သူတို့ကတော့ နဂိုတညျးက စာတတျခငျြစိတျမရှိတာမို့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ မွငျဆရာကွားဆရာ
ကိုကြျောသူရိနျပွောသလို I don't care for losers. လို့ပဲပွောရမယျထငျပါတယျ။ တဈခါတဈရံကတြော့လညျး learning must be fun ဆိုလို့ ရယျရဖို့လောကျပဲအားထုတျနရေငျလညျးအဓိကလမျးကွောငျးက လှဲသှားနိုငျပါတယျ။)
အောငျမွငျတဲ့စာသငျသားတဈယောကျဖွဈဖို့ စာသငျတာကိုနှဈသကျနိုငျရပါမယျ။ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ပတျသကျလို့ ပြျောစရာနဲ့သကျတောငျ့သကျသာဖွဈမယျ့ အခြိနျတဈခုတော့ပေးဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့
အဘိဓါနျ၊ သဒ်ဒါစညျးကမျးလမျးညှနျစာအုပျမြား နဲ့အငျတာနကျစာမကျြနှာမြားကိုလလေ့ာပွီး အင်ျဂလိပျစာကွောငျးတဈခုလောကျမှနျမှနျကနျကနျခရြေးကွညျ့ခွငျး
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားလလေ့ာမှုလုပျတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျမယျဆိုရငျ ကိုယျ့ဘဝပုံစံကိုပွောငျးလဲပဈဖို့လိုပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ တဈယောကျယောကျဟာ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပျတဈအုပျကို တဈနေ့ နာရီဝကျဖတျမယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီး ၄ငျးဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျးဖွဈမွောကျအောငျလုပျခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ဘဝမှာဒီလိုမြိုး အသေးအဖှဲကိစ်စ၊ ဒါပမေယျ့ အမွဲတမျးတညျမွဲနမေယျ့အပွောငျးအလဲ လေးတဈခုလုပျရတာ အငျမတနျခကျခကျခဲလှပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့အင်ျဂလိပျစာ လလေ့ာရတာ ပြျောစရာမကောငျးဘူးလို့အမွငျရှိထားရငျပေါ့။ ဒါပမေယျ့စာသငျသားတို့မမသေ့ငျ့တာက နစေ့ဉျ ၁၅ မိနဈလောကျအင်ျဂလိပျစာလလေ့ာတာဟာ တဈလမှာတဈခါလောကျ တဈနကေုနျလလေ့ာတာထကျ ပိုရလာဒျကောငျးတှဖွေဈထှနျးနိုငျတယျဆိုတာပါပဲ။
၃။ ကိုယျ့ဘဝကို ပိုပွီးပွောငျးလဲမှုထပျလုပျခွငျး
ပထမဆုံးကိုယျ့ကိုယျကိုပွောငျးလဲရတာအခကျဆုံးဆိုရငျ နောကျကလိုကျလာရတဲ့အပွောငျးအလဲတှဟောလညျးခကျတာပါပဲ။ စာသငျသားအမြားစုဟာ ပထမအဆငျ့ခွလှေမျးလှမျးပွီးရငျအဲဒီနရောမှာတငျရပျနတေတျကွတယျ။ ဆိုပါစို့။နတေို့ငျးအင်ျဂလိပျစာအုပျတဈအုပျဖတျတယျဆိုရငျ စာဖတျရုံအဆငျ့ပဲရပျနကွေတယျ။ တခွား အင်ျဂလိပျစာတိုးတကျမယျ့ အလုပျတှတှေအေမြားကွီးကိုဆကျမလုပျကွတော့ဘူး။ စာသငျသားကောငျးတဈယောကျမှာ လုပျရမယျ့ activities တှစေုစညျးထားသငျ့တယျ။ (စာဖတျခွငျး၊ ရုပျမွငျသံကွားကွညျ့ခွငျး၊ အသံထှကျလကေ့ငျြ့ခွငျး၊ နားထောငျခွငျး စတာတှေ) ကနေ မိမိရဲ့စိတျခံစားမှုအခွအေနပေျေါမူတညျပွီးတဈခုမဟုတျတဈခုရှေးခယျြရပါမယျ။ လလေ့ာမှုပုံစံတဈခုတညျးနဲ့မလုံလောကျပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ (၁) သငျခဏလေးနဲ့ပငျြးသှားပါလိမျ့မယျ။ (၂) လလေ့ာရတဲ့ဘာသာစကားစှမျးရညျနယျပယျဟာအငျမတနျကဉျြးမွောငျးလှနျးပါတယျ။ ဥပမာ စာဖတျမယျဆိုရငျ သဒ်ဒါ၊ ဝေါဟာရ၊ နားလညျနိုငျစှမျးနဲ့အရေးအသားမှာ တိုးတကျလာပမေယျ့အသံထှကျမှာတိုးတကျလာမှာမဟုတျပါဘူး။
(ဖိုရမျတှမှောခဏခဏတှရေ့တတျတဲ့ “အင်ျဂလိပျစာကိုဘယျလိုလလေ့ာရမလဲ။ အကွံဉာဏျပေးကွပါ” ဆိုတဲ့မှတျခကျြလေးတှမွေငျရရငျတျောတျောလေးစိတျမသကျမသာဖွဈမိပါတယျ။ ဒီဖိုရမျမှာလို အင်ျဂလိပျစာဘယျလိုလလေ့ာရမလဲ နညျးလမျးတှရေေးပေးနတေဲ့သူတှေ ရေးထားတာတှအေမြားကွီးရှိပါလကျြနဲ့ ကိုယျတိုငျ ရှာဖတျဖို့လုံ့လလေးတောငျမထုတျနိုငျတဲ့သူဟာ အင်ျဂလိပျစာ (ဘာသာစကားတဈခု၊ အတတျပညာတဈခု)ကိုတတျလာဖို့ဘယျလို့မှ လမျးစမမွငျမိပါဘူး။ တကယျတတျခငျြတဲ့သူဟာ အဲဒီလိုမေးနမှောမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့မှာရှိနတေဲ့အဆငျ့ကလေးနဲ့ တငျ ဗဟုသုတ ရှာဖှစေုစောငျးရငျးနဲ့တဈနထေ့ကျတဈနတေို့းတကျလာရမှာပါ။ တဈကယျတမျးခြုပျကွညျ့လိုကျတော့ ဘဝမှာ ကိုယျလိုခငျြတာကိုရဖို့ လုံလဝိရိယက အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ဘယျနယျပယျဘယျလောကမှာပဲကွညျ့လိုကျကွညျ့လိုကျ အောငျမွငျတဲ့သူတှဆေိုတာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့(Self-control)သူတှဖွေဈတယျဆိုတာတှရေ့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ကိုယျ့ကိုယျကိုထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ဆိုတာ အငျမတနျခကျခဲလှတယျမဟုတျလား။ ဒါကွောငျ့ နညျးနညျးထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့သူက နညျးနညျးအောငျမွငျပွီး မြားမြားထိနျးခြုပျနိုငျတဲ့သူက မြားမြားအောငျမွငျကွတာပေါ့။ သငျ winner လုပျခငျြသလား loser လုပျခငျြသလား။ သငျဖွဈခငျြတာဖွဈရမှာမလှဲပါဘူး။ စိုငျးထီးဆိုငျရဲ့သီခငျြးစာသားလေးလို “+ + +ထိုကျတနျတဲ့ရငျးနှီးမှုတော့ရှိရမယျ။ မယုတျမလှနျတဲ့ကြိုးစားမှုတော့ရှိရမယျ။ နတျစီတဲ့အိပျမကျလှလှမြား လှယျလှယျနဲ့မရ . . + + +” ဆိုသလိုပေါ့။)
173 members like this
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on July 23, 2012 at 16:18
Thank you so much Saya.
Permalink Reply by upokun on July 23, 2012 at 19:08
Great! Thank you very much Saya.
Permalink Reply by Gyit on July 24, 2012 at 11:59
I appreciate all of your post & can see your good-will on us that to be brilliant ppl ...Thks for your post ,your vision & your voluntary........Thks bro;
Permalink Reply by ayeayethat on July 24, 2012 at 12:15
Thank you Saya Zar Ni.
Permalink Reply by thet hnin on July 24, 2012 at 12:29
Permalink Reply by Moe Moe Thu on July 24, 2012 at 12:33
ဆရာ ပြောတာတွေ အမှန်ချည်းပါပဲ၊ စာသင်ဘူးသူတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။
Permalink Reply by 39ijb6x5k9niu on July 24, 2012 at 12:44
ဆရာပေးတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေရယ်၊ ဆရာပြောတဲ့ စကားတွေဟာ အရမ်းတန်ဖိုးရှိ လှပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။
Permalink Reply by Pyone Myat Maw on July 24, 2012 at 13:38
(ဖိုရမ်တွေမှာခဏခဏတွေ့ရတတ်တဲ့ “အင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ အကြံဥာဏ်ပေးကြပါ” ဆိုတဲ့မှတ်ချက်လေးတွေမြင်ရရင်တော်တော်လေးစိတ်မသက်မသာဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာလို အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ နည်းလမ်းတွေရေးပေးနေတဲ့သူတွေ ရေးထားတာတွေအများကြီးရှိပါလျက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ရှာဖတ်ဖို့လုံ့လလေးတောင်မထုတ်နိုင်တဲ့သူဟာ အင်္ဂလိပ်စာ (ဘာသာစကားတစ်ခု၊ အတတ်ပညာတစ်ခု)ကိုတတ်လာဖို့ဘယ်လို့မှ လမ်းစမမြင်မိပါဘူး။ တကယ်တတ်ချင်တဲ့သူဟာ အဲဒီလိုမေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့အဆင့်ကလေးနဲ့ တင် ဗဟုသုတ ရှာဖွေစုစောင်းရင်းနဲ့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးတက်လာရမှာပါ။ တစ်ကယ်တမ်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဘ၀မှာ ကိုယ်လိုချင်တာကိုရဖို့ လုံလ၀ိရိယက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဘယ်နယ်ပယ်ဘယ်လောကမှာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့(Self-control)သူတွေဖြစ်ဆိုတာတွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲလှတယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူက နည်းနည်းအောင်မြင်ပြီး များများထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူက များများအောင်မြင်ကြတာပေါ့။ သင် winner လုပ်ချင်သလား loser လုပ်ချင်သလား။ သင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရမှာမလွဲပါဘူး။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့သီချင်းစာသားလေးလို “+ + +ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတော့ရှိရမယ်။ မယုတ်မလွန်တဲ့ကျိုးစားမှုတော့ရှိရမယ်။ နတ်စီတဲ့အိပ်မက်လှလှများ လွယ်လွယ်နဲ့မရ . . + + +” ဆိုသလိုပေါ့။) super like it
Read more: အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတို့ရင်ဆိုင်ရမည့်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှု ၃ ရပ် - Myan... http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:667759#ix...
Permalink Reply by San Lwin on July 24, 2012 at 14:13
ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုတော့ရှိရမယ်။ မယုတ်မလွန်တဲ့ကျိုးစားမှုတော့ရှိရမယ်။ နတ်စီတဲ့အိပ်မက်လှလှများ လွယ်လွယ်နဲ့မရ
Permalink Reply by Thu Rein Soe on July 24, 2012 at 14:22
Permalink Reply by 22od6eu3lvgnn on July 24, 2012 at 14:55
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ဒီလိုမျိုး ဗဟုသုတ ရစရာတွေ တင်ပေးထားတဲ. အတွက်ပေါ.
Permalink Reply by Ngwe Min Phyo on July 24, 2012 at 15:18